प्रचण्ड रिमोटकन्ट्रोलबाट चले, सरकारमा नरहन सक्छौः दिलनाथ गिरी - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउनु पर्ने माग गर्दै सार्वजनिक विदा दिन जनदबाब भएपनि सरकारले विदा दिएन । पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवस मनाउनको लागि सबै दलहरु सहमत पनि भएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंमले पनि पृथ्वी जयन्तीलाई विदा दिन सकारात्मक भएको बताएका थिए । तर मंगलवार रातीसम्म विदा दिने कुनै निर्णय हुन सकेन । विदा नदिने निर्णयप्रति सत्तारुढ राप्रपाले सरकारमा नै नबस्ने चेतावनी समेत दिएको छ । आज पृथ्वी जयन्ती । माओवादी बाहेक कांग्रेस एमाले र राप्रपा लगायतका दलहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । राप्रपा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट भएको छ । यसै विषयमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानीः
विदा नदिने सरकारको कदम प्रचण्डलाई महंगो पर्छ
आम जनताको चाहना पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउनु पर्ने भन्ने छ । विगतका बर्षमा जे भएपनि यस बर्ष सरकारले एकताका प्रतिकका रुपमा रहेका पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा विदा दिने आशा गरेका थियौं । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदा दिने आँट गर्न सक्नु भएन । सिंगो देशलाई एकताबद्ध गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान दिदा सरकारको के जान्छ ? पृथ्वी जयन्तीमा विदा नदिने प्रचण्डको अडान सरकारलाई महंगो पर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलरुले पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसको रुपमा मनाउने भनेका थियौं । यो दिवस मार्फत सामाजिक सदभावको सन्देश दिन खोजेका थियौ । एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भनेका थियौ । तर प्रचण्डको कदमले यो राष्ट्रलाई छिन्नभिन्न र विखण्डनतिर लैजाने त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
जनताको मनमा ठूलो चोट पुग्यो
हामी नेपाली हौं । नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौं । राष्ट्रिय एकताको प्रणेताको रुपमा रहेका पृथ्वीनारायण शाहलाई सबैले सम्मान गर्छन । नेपाल निर्माणको धरोहर पृथ्वी जयन्तीलाई आम नेपालीले गर्वको दिनको रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छन् । पुथ्वी जयन्तीले नेपाल र नेपालीलाई एकताबद्ध भएर हिड्नु पर्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले विदा नदिने अडानको कारण सिंगो नेपाली जनताको मन दुखेको छ । जनताको चाहना र भावना विपरीत यो सरकार चलेको छ । अब यसको छिनोफानो आगामी निर्वाचनले गर्नेछ । यो सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हो कि अरुकै लागि हो ? निकै ठूलो गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ ।
सरकारसँग अब सहयात्रा हुन नैतिक प्रश्न
अहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । प्राविधिक रुपमा छौं । सरकारले हामी सरकारमा भएकोजस्तो व्यवहार गरेको छैन् । राष्ट्रिय दिवसमा सरकारले विदा नदिने निर्णयले थप शकां जन्माएको छ । नेपालको पहिचान दिने एकताको सुत्रधार महान व्यक्तिको सम्मान गर्न सरकारलाई किन टाउको दुखाई भयो ? निकै गम्भीर प्रश्न छ । विगतको बर्षमा कटौती गरेको इसाई धर्मालम्बीहरुलाई विदा दिने काम भयो । हो इसाई धर्माबलम्बीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । तर राष्ट्र निर्माणलाई सम्झने काममा किन टाउको दुखाई भयो ? राष्ट्रलाई एकता गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न सरकार चुकेको छ । यो सरकारले राष्ट्रको विरोधमा काम गरेको छ । यो कदमले सरकार र राप्रपाको बीचमा निकै ठूलो तिक्तता जन्माएको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । हाम्रो पार्टी गम्भीर छ । सरकारसँगको सहयात्रा टुट्न पनि सक्छ । हामीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रचण्ड रिमोटकन्ट्रोलबाटै चले
सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाउनुभएको पाँच दलको बैठकमा मैले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पार्टीले आयोजना गर्ने चियापान कार्यक्रमको निमन्त्रणा कार्ड लिएर गएको थिए । सबैलाई निम्ता दिए । मैले नै एकता दिवसको अवसरमा पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । मरो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विदा दिंदा आफूहरुलाई आपत्ति नभएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले म दलहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छु भन्ने जवाफ दिए । तर झलनाथ खनालले सोधका थिए–प्रचण्डजी सबै दलहरु यही छौं अब कोसँग छलफल गर्नुहुन्छ, दलका शीर्ष नेताहरु त यही छौं । प्रचण्डले होइन म २७ गते अघि नै टुंगो लगाउछु भनेर बचन दिनुभएको थियो । खै कोसँग छलफल गर्नु भो विदा नदिने टुंगोमा पुग्नु भएछ । यसले स्पष्ट पारेको छ–प्रचण्ड कतै रिमोटकन्ट्रोलबाट चलेका छन् ।
शालिक ढालेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन
इतिहासलाई कसैले पनि विर्सन मिल्दैन । इतिहासका राम्रो पक्षको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । आज पृथ्वीनारायण शाहलाई विश्वले चिन्छ । नेपाल र नेपालीको पहिचान दिने व्यक्तिलाई हामी किन अपमान गर्न खोजिरहेका छौ ? यो कदम जनताको विरुद्धमा छ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पृथ्वी जयन्तीमा दिदै आएको विदा कटौती गर्ने काम भयो । अहिले विदा दिन्छु भनेर घोषणा गरेपनि अन्तिम अवस्थामा आएर कतैबाट प्रभावित भएर बचन पूरा गर्नसक्नुभएन ।
प्रचण्ड, ओली र देउवा मिलेपछि मधेसी माेर्चा सकसमा
एमालेको सहमतिमै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो : प्रचण्ड
पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
Previousमधेसी मोर्चालाई अराजकता मच्चाउन किन छुट ?
Nextदुतावासको भात खाएर विखण्डनका कुरा ? ; रावल